Ogaden News Agency (ONA) – Meles wuxuu ka faa’idaysanayaa jahliga Somalida – dhicii London
Meles wuxuu ka faa’idaysanayaa jahliga Somalida – dhicii London
Posted by ONA Admin	/ March 6, 2012
Mashruucan looga ururinyo lacagta Somalida dagan London iyo UK oo loogu magacdaray maalgashiga Biya-Xidheenka Itobiya wuxuu si dhab u muujinayaa sida uu dhiigyacabka Itobiya Meles u yaso shacabka Somaliyeed. Mashruucan uu xisbiga Wayaanaha ee TPLF/EPRDF sida aadka u buunbuuniyay waxay aqoonyahanada Itobiya ee sida fiican u yaqaana kooxdan ku macneeyeen inuu yahay mashruuc loogu talagalay boob iyo brobagaanda lagaga jeedinayo shacabka Itobiya ee kacsan arimaha dhabta ah ee ka socda dalkooda. Arima horey u dhacay oo ahaa mashaariic beenaad ayayna tusaale ahaan u soo qaateen. Sikastaba ha ahaatee, sanadkii tagay waxay Itobiya u soo dirtay caasimadaha dalalka ay ugu badan yihiin qurba-joogtooda gaar ahaan Mareykanka ergooyin kala duwan si looga gado mashruucaa. Wasiiro dhowr ah iyo niman aqoonyahana ah ayaa isa soo raacay si loogu sharxo dadka oo loogu sheego inuu mashruucan yahay mid ay maalkooda ku aamini karaan oo goordhow ay faa’iido ka heli doonaan. Wayna ku hungoobeen. Aqoonyahan caan ah oo haysta PhD qoraal uu arintaa kaga hadlayay waxaa ka mid ahaa su’aalaha uu isweydiinayo; Mashruucan mayahay mid dhab ah horta? Maxaase waqtigan loo sheegay? Maxaa loogu dhagay mashruucan iyadoo gobol ahaan iyo caalamkaba la xaqiijiyay inuu keenayo arima ka duwan sida loogu talagalay? Maxaa haduu mashruuca dhab yahay loogu xusi waayay Qorshaha Horumarka Shanta Sano?
( .. Is the project serious and genuine? Why is it announced at this particular moment? Why insist on this project while all regional and global indicators and the adverse outcome of our exercise with Gibe III advise against it? More importantly, if it is advertised as the project of the millennium, how come it is not even remotely indicated in the much talked aboutEthiopia’s Five Year Development Plan, billed as the Millennium Growth and Transformation Plan (GTP).
Wafdigii loo soo diray Mareykanka way ku ceeboobeen oo dadkii soo fadhiistay shirka lagu xayaysiinayo mashruuca way ku qancin kari waayeen inuu yahay mashruuc si cilmi ah loo darsay, ka dibna way diideen dadkii inay qaataan saamiyadii la rabay.
Waxaa shirkan London lagu qabtay shalay ka horeeyay midkii Denmark ee soo fashilmay, iyadoo dadkii yimid ee tobonaanka ahaa laga waayay wax dhaafsan dhowr kun inay bixiyaan. Fashilkaa ka dib; waxaa Adisababa isku sii daayay Cabdi iley oo jecel inuu ka dhex muuqdo oo ku raali galiyo Zinawi oo u cadhaysan gaar ahaan markuu ku fashilmay mashaariic badanoo uu ka gaday Zinawi ka dibna la ogaaday inay ahaayeen been aan waxba ka jirn . Arintan Cabdi iley waxay la mid tahay sheeko qosol (joke) xisbigii shuuciga ee Ruushka loo alifay.
Waxaa la yidhi; Xayawaanka ku nool Ruushka ayaa waxaa la siiyay qorshahooda shnta sano ee soo socota laga doonayo inay qabtaan oo ahaa inay dhisaan biyaxidheen weyn. Sadeex sano markay wadeen ayaa waxaa ka go’ay sibidhkii. Waxaa la’is weydiiyay yaan u dirnaa Moscow oo Xisbiga u sheega dhibaatadan oo nooga soo qaada sibidh aan ku dhamaystirno mashruuca. Libaaxii ayaa la diray. Markuu soo noqon waayay ayaa waxaa laga daba diray Shabeel. Isagiina wuu soo noqon waayay. Waxaa la xaqiiqsaday in labadoodiiba xabsiga la dhigay oo lagu eedeeyay inay sibidhka suuqa madow ka gateen. Intii kolba mid la dirayay waxaa qaylinayay dameer oo lahaa war aniga ii dira. Ugu dambayntii ayaa la yidhi bal aan dirno midkan qaaqdiisa hana dhaafee. Maddo markii isagiina la waayay oo la leeyahay ma Libaax iyo Shabeel meel lagu bahdalay ayuu dameer wax ka keeni, ayaa waxaa soo muuqday tareen biiibta haya oo dameerkii uu dusha ka saaran yahay sibidhna uu ka buuxo. Markaasaa la weydiiyay sababta. Wuxuu yidhi intaan idinka maqnaa oo idil damaashaad iyo dalxiis ayaan ku jiray. Saaxiibaday ayaa xukuma xisbiga Shuuciga ee miyaydaan ogayn.
Haatan Cabdi iley wuxuu doonayaa isagoo biibta haya inuu ka dago Addisababa oo yidhaahdo miyaanan idin odhan anigaa aqaana sida loo karbaasho Somalida ee i dira. Waxyaabaha ka dhacay safaaradda London shalay waxba ma dooriso arintaa. Sababtoo ah mashruuc dhaqaale oo u baahan in laga fiirsado ayuu Cabdi iley u rogay mashruuc siyaasadeed oo dadka uu ku handado midkaan lacagta bixin waa nabad-diid ay uga dhamaatay Ogadenya. Waxaa durbadiiba farta uu ku fiiqay xawaaladaha taasoo dhalisay inay KAAH iyo Zuhuur bixiyaan lacag badan oo baad ah, ileen mashruucan dhaqan galkiisa hadiiba uu hirgalo xitaa waa 10 sano ka dib. Waxaa kaloo la sheegayaa inuu raadinayo Cabdi iley una hanjabayo xawaaladda Amal.
Dad gudaha u galay safaaradda oo ka soo warbixiyay waxyaabaha ka dhacay meesha waxay sheegeen inuu Cabdi iley ugu dambayntii ku baryootamay; “.. £50 ugu yaraan bixiya oo waa hagbad kuu taala oo kalee jeebka gacanta galiya.” markii laga dhaga adaygayna uu (form) ku soo taxay uu leeyahay soo buuxiya. Waxay ahayd arimo dhakafaar ku noqday dadkii waxa meesha ka dhacay.
Banaabaxa jaaliyadaha Ogadenya ay ku soo bexeen safaaradda horteeda waxay ahayd ujeedadeeda in gacan ku dhiigle Cabdi iley la tuso inuusan sharaf ku lahayn sahabka dhexdiisa, waana midda keentay inuu dhex seexdo safaaradda, isla marahaantaana kolba reer balansado uu ku handado dhibaato inuu gaadhsiin doono eheladooda hadaanay bixinin lacagtaa baada ah. jaaliyadaha S.Ogadenya ee ka xorta ah cabsida gumaysiga Itobiya iyo adeega-yaashiisa inkastoo ay ka xunyihiin boobka lagu hayo dadkan masaakiinta ah ee xoolahooda loo qaadayo mashruuc beenaadka TPLF/EPRDF, hadana qofkii isaga sidaa doonaya waxaan leenahay –Ilaa Jahanam- xor ayaad u tahay jeebkaaga ilowse ku talagal dhaca meesha yaala.
KAAH EXPRESS iyo cid walba waa la suaali doona halka ay lacagteeda ku bixisay – Waa hubaal!!!
Miyay fiirin waayeen hooyooboyinka reer Ogaadeeniya ee hadh iyo habeen u nafbaxaya adeeg caafimaad la’aan darteed oo ay ugu yar tahat irbad kabuubyo.
Ileen il ribix aragtaa rixin ma eegto!!!
waxay ila tahay in barnaamijka biyo xisheenku inuu yahay qarafeysi,maadaama meliz waayey wuxuu canjeero ku cuno ama waa nadaam dilaaleysi ah,raga iyo dumarka moodaya in maalgashi ka jiro ethiopia waa dad aanba waxba kala soconin habdhaqanka mooryaanta ka jirta adisababa